အောင်ခုနှစ်တွင် - မြန်မာလက်မှုပညာများအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကမြန်မာလူမျိုး၏နှလုံးနှင့်ဦးအောင်နန်းမှာသိမ်းသွားလေ၏အားဖြင့်ဒါသည်အလွန်ကောင်းစွာထင်ဟပ်နေသည် – မြန်မာလက်မှုပညာများအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ.
ဒီနေရာတွင်သေးငယ်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုအနေဖြင့်အိမ်ခြေများအတွက်အလွန်ကြီးမားပြားမှတက်အလတ်စားပရိဘောဂပစ္စည်းများအထိအနုစိတ်တ္ထုထွင်းထုကျွမ်းကျင်သစ်သားလုပ်သားများတွေ့နိုင်ပါသည်. ရုပ်တုဆင်းတုများတွင်အသေးစိတ်အဆင့်ဒီတော့အနုစိတ်နှင့် facinating ဖြစ်ပါသည်.
သိမ်းသွားလေ၏၏နောက်ထပ်အုပ်စုတစုမန္တလေးရဲ့ကျော်ကြားသောမြို့ရိုးကိုကုလားများနှင့်ရောင်စုံလုပ်နေပါတယ်, အခြားသူများကိုချယ်လှယ်သောခေါင်းအုံးအမှုပေါင်းလုပ်နေတုန်း, စားပွဲပေါ်မှာအပြေးသမားစသည်တို့. အဆိုပါပစ္စည်းများလက်ရာမြောက်သောဖြစ်ကြောင်းနှင့်စျေးနှုန်းများအရာဝတ္ထုစေရန်လိုအပ်သောလုပ်အားထည့်သွင်းစဉ်းစားအလွန်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့များမှာ.
သငျသညျကြီးမားသူတွေကိုအနည်းငယ်သာ momentos ထံမှဤနေရာတွင်လူတိုငျးအတှကျတစ်ခုခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်.
သငျသညျအခြို့သော souveniers အိမ်ပြန်ယူရတဲ့၏နှင့်တစ်ဦး bargain ရှာနေတူသောစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်ထို့နောက်သို့စွနှင့်အောင်နန်းမြန်မာလက်မှုပညာများအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲစူးစမ်း, က၎င်း၏ Goodies အမျိုးမျိုးနှင့်အတူဒိုင်းဖို့ထုပ်ပိုးယိုဖြစ်ပါသည်.